कस्तो अवस्थामा माइग्रेनको समस्या बढ्छ ? — News of The World
स्वास्थ्यविज्ञका अनुसार जो महिलाको पेटमा चर्वि बढी हुँदै जान्छ उनीहरुमा दुब्ला महिलाको तुलनामा माइग्रेनको समस्या ३७ प्रतिशत बढ्ने बताइन्छ । एक अध्ययनका अनुसार मोटोपन कम गर्दै जानु भयो भने तपाइले यसको फरक महसुस गर्नुहुन्छ । स्वस्थ्य विज्ञका अनुसार मोटोपन बढ्दै जाँदा यसको सिधा असर माइग्रेनमा पर्दैै जान्छ । त्यसकारण तपाइको मोटोपन नियन्त्रण गर्न आवस्यक छ । यसको लागि नियमित योगाका साथै बिहान बेलुका सन्तुलित आहार लिनु आवस्यक छ । माइग्रेनका समस्या हुनेहरु जंक फुड र तनावबाट टाढा रहनु नै उत्तम हुन्छ ।
त्यस्तै एक अध्ययनका अनुसार एलर्जीग्रस्त मानिसहरुमा अन्य व्यक्ति भन्दा बढी माइग्रेनको समस्या पाइन्छ । एलर्जीका कारण शरीरमा तथा रसायनको पदार्थको उत्पादन हुन्छ । जसका कारण टाउको दुख्ने कारण बन्छ । एलर्जी हटाउन दिइने औषधिले माइग्रेनको समस्या ५० प्रतिशत कम हुने बताइन्छ ।
आजभोलीको मौसममा एलर्जी हुने ज्यादा सम्भावना हुन्छ । यदि तपाइमा एलर्जीको समस्या छ भने आफ्नो घर सफा राख्नुहोस् । धुलो तथा माटो भएको ठाउँमा नजानुहोस । बाहिरको खाना कम खानुहोस् । बाहिर निस्कदा माक्स वा कपडाले मुख छोपेर हिड्नुहोस् ।
त्यस्तै अर्को एक अध्ययनका क्रममा तापमानमा पाँच डिग्री सेल्सियस बढ्नु पनि माइग्रेनको खतरा ७.५ प्रतिशत बढ्छ । यसकारण माइग्रेनको समस्या गर्मीबाट बच्ने कोशिष गर्नुहोस् । बढी गर्मीमा घरबाट बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो हुन्छ ।
वर्षाको समयमा किन बिग्रन्छ पाचनतन्त्र ?
मौसम परिवर्तन सँगै हाम्रो शरीर पनि प्रभावित हुन्छ । मौसमको परिवर्तनसँगै रोग प्रतिरोधक तन्त्र (इम्युन सिस्टम) र पाचनतन्त्रमा पनि परिवर्तन हुन्छ । वर्षाको समयमा शरीरमा धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अपच हुनु, फुड प्वाइजन, डायरिया लगायतका धेरै स्वास्थ्य समस्या हुने हुनाले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
वर्षाको मौसममा शरीरमा पचाउने शक्ति कम हुन्छ । बर्षाको बेलामा हामी धेरै मानिसहरु हिलो र पानी परिरहेका कारण भरसक घरबाट बाहिर निस्कदैनौं । यसकारण पनि शरीरको सक्रियता कम हुने र पाचनतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्छ ।
यसरी हुन सक्छ राहत
बर्षाको समयमा हल्का र पोषक तत्वयुक्त खाना खाने । चिल्लो खानाबाट टाढै रहने । शारीरिक रुपमा सक्रिय रहने । यदि पानीका कारण मर्निङ वाक तथा जिम जान पाउनु भएको छैन भने घरभित्रै शारीरिक गतिबिधि बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।
वर्षातको समयमा तारेको खाना, मसला बढी प्रयोग गरिएको खाना, चिया या कफिका बढी प्रयोग हुने सम्भावना हुन्छ । यसकारण यस्ता खाना कम खानुनै उपयुक्त हुन्छ । शारीरिक गतिबिधि नहुनाले यस्ता खान पच्न गाह्रो हुन्छ ।
वर्षाको समयमा डायरिया बढ्ने अधिक सम्भावना हुन्छ । हुन त यस्तो समस्या बर्षाको बेला मात्र नभइ अन्य समयमा पनि हुन्छ । तर, बर्षाको बेलामा बढी हुने भएकोले सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
पेट दुख्नु, ज्वरो आउनु, दिशामा रगत देखिनु, पेट फुल्ने लगायतका लक्षण पनि देखिन्छन् । साथै फुड प्वाइजन पनि डायरियाको कारण बन्न सक्छ ।